Baidoa Media Center » Madaxweyne Shariif oo maanta Muqdisho kula kulay Catherine Ashton. (Sawiro)
Madaxweyne Shariif oo maanta Muqdisho kula kulay Catherine Ashton. (Sawiro)
August 27, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa la kulmay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda ammaanka Catherine Ashton iyo wafdi ay hoggaamineysay.
Kulankan oo ay ka qeyb galeen guddoomiyaha KMG ah ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Generaal Muuse Xasan, R/wasaaraha Dalka Dr. C/wali Maxamed Cali iyo afhayeenkii hore ee Baarlamaanka mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaa looga hadlay dhammeystirka marxaladda KMG ah, sida ay wax u socdaan iyo siyaasadda Midowga Yurub ee dalkan Soomaaliya.
“Waxaa na dhex maray wada hadal aad iyo aad u fiican waxaana kala qaadanay warbixin wixii la soo maray iyo meesha la joogo, waxyaabaha yaryar ee haray iyo sida loo dhammeynayo iyo waqtiga soo socda sida la rabo inay Soomaaliya noqoto iyo sida ay tahay in loo garab istaago, waxyaabihii aan ka hadalnayna dhammaantood waa isku afgarannay” ayuu yiri madaxweyne Shariif oo saxaafadda la hadlay kulanka kaddib.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo ay garab taagan yihiin masuuliyiinta kulanka kala qeyb gashay ayaa sheegay in Catherine Ashton ay ballan qaadday in Midowga Yurub uu sii wadi doono isla markaana xoojin doono taageerada ay siiso dalka Soomaaliya.
Sidoo kale madaxda Soomaalida ayaa uga mahad celiyay Midowga Yurub taageerada ay siiyeen waddanka.
“Waxaan u sheegnay Hannaanka waxa ka dhimman in si wanaagsan loo dhammeystiri doono, doorashada baarlamaankana ay dhici doonto Berri hadduu Alle idmo, doorashooyinka kalena ay daba socon doonaan. Taasna waxay u arkeen inay tahay horumar weyn oo Soomaaliya ay ku tallaabsatay, kaas oo taabanayaa dhinaca amniga, Siyaasadda, arrimaha bulshada iyo horumarka” ayuu yiri Madaxweyne Shariif.